I-Google Iqalisa i-Google Tag Manager | Martech Zone
Uma uke wasebenza kusayithi leklayenti futhi kwadingeka ungeze ikhodi yokuguqula isuka ku-Adwords ibe isifanekiso kepha kuphela lapho leyo thempulethi iboniswa ngezinqubo ezithile, uyazi izinhlungu zamakhasi wokumaka!
Amathegi angamabhithi amancane ekhodi yewebhusayithi angasiza ukuhlinzeka ngemininingwane ewusizo, kepha angadala nezinselelo. Amathegi amaningi kakhulu angenza amasayithi ahambe kancane futhi abe mbumbulu; amathegi asetshenziswe ngokungafanele angahlanekezela ukulinganisa kwakho; futhi kungadla isikhathi kumnyango we-IT noma ithimba le-webmaster ukwengeza amathegi amasha-okuholela esikhathini esilahlekile, idatha elahlekile, kanye nokuguqulwa okulahlekile.
Namuhla, i-Google imemezele Isiphathi Somaka we-Google. Leli yithuluzi elizokwenza amakhasi wokumaka abe lula kakhulu kuwo wonke umuntu!
Izici ze-Google Tag Manager zifakwe kuhlu kusayithi labo:
Ubukhali bokumaketha - Ungaqala amathegi amasha ngokuchofoza okumbalwa nje. Lokhu kusho ukuthi ukumaketha kabusha nezinye izinhlelo eziqhutshwa yidatha ekugcineni kusezandleni zakho; kungabe kusaba khona amasonto okulinda (noma izinyanga) zokuvuselelwa kwamakhodi wewebhusayithi-nokulahlekelwa ngamathuba wokumaketha nawokuthengisa abalulekile kunqubo.
Idatha enokwethenjelwa - Ukuhlola amaphutha okusebenziseka kalula kwe-Google Tag Manager nokulayisha ngokushesha ithegi kusho ukuthi uzohlala wazi ukuthi wonke umaki uyasebenza. Ukukwazi ukuqoqa idatha ethembekile kusuka kuwebhusayithi yakho yonke nakuzo zonke izizinda zakho kusho izinqumo ezinolwazi oluningi nokwenza umkhankaso ongcono.
Ngokushesha futhi kulula - Umphathi Wethegi yakwaGoogle uyashesha, enembile, futhi yakhelwe ukuvumela abathengisi ukuthi bengeze noma bashintshe amathegi noma nini lapho befuna, ngenkathi futhi benika ozakwabo be-IT nabaphathi bewebhu ukuzethemba ukuthi isayithi lihamba kahle — futhi lilayisha ngokushesha — ukuze abasebenzisi bakho bangalokothi bashiywe belenga .
Tags: umphathi we-google tagGoogle +tagumphathi wethegiukumakatags
Okthoba 3, 2012 ngo-3: 30 AM
Angikazami lokhu, futhi ngisanda kukuzwa kuwe. Siyabonga ngokukhomba lokhu, ukumaka kwenza kube lula kuwo wonke amakhasi. Ngabe bavula i-plug-in naku-WordPress ukumaka?
I-Oct 3, i-2012 ku-5: i-03 PM
Angikayiboni okwamanje, @disqus_FHwBYQKmUU: disqus kepha bekungeke kuthathe isikhathi eside ukuyakha!